မျက်စိဆေးခန်း - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
တနင်္လာ-သောကြာ ၀၉.၀၀-၁၉.၀၀, စနေ-တနင်္ဂနွေ ၀၉.၀၀-၁၇.၀၀
၆၆ (၀) ၂၇၁၁-၈၉၉၈-၉
Samitivej Sukhumvit ဆေးရုံကြီးမှာရှိတဲ့ မျက်စိဆေးခန်းဟာ အကောင်းဆုံး မျက်စိကုသစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ ကျော်ကြားတဲ့ သမားတော်တွေဟာ ခေတ်အမီဆုံး ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Bangkok ဌာနမှာ ပုံမှန် အမြင်အာရုံစစ်ဆေးမှုများနဲ့ ရောဂါရှာဖွေမှုတွေကနေ ရေတိမ် (glaucoma) နဲ့ အတွင်းတိမ် (cataract) ကုသမှုတွေအထိ အားလုံးကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လက်မှတ်ရ မျက်စိကုဆရာဝန်တွေနဲ့ သူနာပြုတွေဟာ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ Bangkok မြို့မှာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအရှိဆုံး မျက်စိဆေးခန်းကို ဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့အတွက် အလွန်ပဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကို LASIK* နဲ့ LASEK တို့ အပါအဝင် လုံးဝပြောင်းလဲသွားမယ့် အဆင့်မြင့် လေဆာခွဲစိတ်ကုသမှုတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတွေကို များသောအားဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ်မှာပဲ ရှင်းလင်းတဲ့ အမြင်အာရုံကို ပေးနိုင်စွမ်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ မျက်စိဆေးခန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနာတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးလာတာဟာ အခုဆို ၂၅ နှစ်တောင် ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ ထိတွေ့ဖို့၊ တုံ့ပြန်ဖို့အတွက် မျက်စိတွေက ဘယ်လောက် အရေးပါလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သဘောပေါက်ပါတယ်။ အလွန်အရေးပါတဲ့ ဒီခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို အမြဲကျန်းမာအောင် ထားဖို့ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်တွေနဲ့ နေ့စဉ် ပုံမှန်ဆေးခန်းချိန်တွေမှာ ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဆေးခန်းချိန်မတိုင်ခင်နဲ့ ဆေးခန်းချိန်နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်တွေကို ဖုန်းကနေတဆင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မျက်မှန်သို့မဟုတ် မျက်ကပ်မှန် ကိုက်မကိုက် အမြင်အားစစ်ဆေးခြင်းများ
မျက်စိရောဂါများနှင့် အာရုံကြောစနစ်ပြဿနာများကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ရန် မြင်သင့်သော ဧရိယာများအား မြင်မမြင်စစ်ဆေးခြင်းများ
မျက်ဖြူသားပေါ်တွင် အဆီဖုပေါ်ခြင်း (pinguecula)၊ မျက်ကြည်လွှာအမှေးတက်ခြင်း (pterygium)၊ ရေတိမ် (glaucoma)၊ အတွင်းတိမ် (cataract)၊ ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သော မျက်စိရောဂါတို့အပါအဝင် မျက်စိနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါအားလုံးအတွက် ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသခြင်း
LASIK* နှင့် LASEK တို့အပါအဝင် လေဆာဖြင့် မျက်စိခွဲစိတ်ကုသခြင်း
မှန်ဘီလူးအတုနှင့် အသံလှိုင်းဖြင့် တိမ်ခွဲစိတ်သည့် ကိရိယာတို့အသုံးပြုပြီး အတွင်းတိမ် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း
မျက်စိစွေခြင်း (strabismus) အားခွဲစိတ်ပြုပြင်ခြင်း
ရေတိမ် (glaucoma) အတွက် မျက်စိဖိအားတိုင်းတာစက်
အမြင်လွှာဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ကြည့်ရှုရန် အမြင်လွှာဓါတ်ပုံရိုက်ခန်း
မြင်သင့်သော ဧရိယာမြင်မမြင်စစ်ဆေးစက်နှင့် မှန်ဘီလူးတိုင်းတာခန်း
အာဂွန် (Argon) လေဆာကုသခန်း
ကွန်ပျူတာသုံး မြင်သင့်သော ဧရိယာမြင်မမြင်စစ်ဆေးစက်
မှတ်ချက် – *Lasik ဖြင့် မျက်စိကုသမှုကို Samitivej Thonburi ဆေးရုံကြီးတွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
၆၆ (၀) ၃၈၃၂-၀၃၀၀ လိုင်းခွဲ ၃၁၀၉-၁၀
၆၆ (၀) ၂၄၃၈-၉၀၀၀ လိုင်းခွဲ ၆၃၃၁
Pratya Boonsong, D.D.S.
Niti Chuysakul, M.D.
Premyot Ngaoteppputaram, M.D.
Songwut Sumatwathanic, M.D.